Amin'ireto fikafika ireto dia hanatsara ny audio an'ny Samsung Galaxy misy UI anao | Androidsis
ny Samsung Galaxy mitondra azy ireo ny custom layer One UI ary izany dia ahafahantsika manatsara ny feon-telefaoninay. Amin'ity tranga ity dia hampiasa ny Galaxy S10 + izahay ary manome traikefa nahafinaritra tokoa. Hampianatra anao ny tetika faran'izay tsara izahay mba hialana amin'izany feo fanampiny izany.
Mamitaka ny fomba fampiasana audio roa mampifandray fitaovana Bluetooth roa ary noho izany ny output audio dia mitovy (indrindra ny fampifandraisana headphones roa) na fomba iray hampiakarana ny fetran'ny feo rehefa mihaino ny mozika ankafizintsika amin'ny headphones isika.
1 Ampitomboy ny haavon'ny feo amin'ny alàlan'ny headphones
2 Ampandehano i Dolby Atmos
3 Adapt Sound
5 Bokotra volume hifehezana ny haino aman-jery
6 Mpanampy amin'ny feo
7 Ampitomboy ny dingana amin'ny volume
8 Bluetooth 5 ho an'ny audio roa
9 Codec manokana
Ampitomboy ny haavon'ny feo amin'ny alàlan'ny headphones
Raha te hampiasa an'io asa io tsy maintsy mavitrika ny maody mpamorona:
Mandeha amin'ny Fikirana> Momba ny telefaona> Rindrambaiko izahay ary tsindrio impito amin'ny nomeraon'ny fanangonana mandra-pahavitrika ny maody mpamorona voalaza etsy ambony.
Raha vantany vao navadika isika dia mandeha amin'ny maody mpamorona sy mikaroka ny safidy antsoina hoe «Esory ny volume tanteraka». Vonoinay izy io ary esorinay ny fetra mety hitranga rehefa manatsara ny feo avy amin'ny mpandahateny na headphone izahay.
Ampandehano i Dolby Atmos
Raha amin'ny telefaona Samsung Galaxy anao manana ny safidinao amin'ny feo Dolby Atmos ianao, dia saika adidy ny manana azy io hiasa hatrany. Io dia ahafahantsika mankafy fanatsarana ny kalitaon'ny feo, ankoatry ny fisian'ireo fampiharana, lalao video na horonan-tsary izay mitondra an'io fomba maheno feo io dia hahazo vokatra miavaka tokoa.
Azonao atao ny mampandeha azy amin'ny tontonana fidirana haingana amin'ny alàlan'ny fananana kisary ho azy. Aza adino fa miankina amin'ny fomban'ny mozika izanyMety ho tsara kokoa na ratsy kokoa aminao ny mampihetsika azy; eto izahay dia mampiseho fika sasany ho an'ny Galaxy Buds.
Adapt Sound dia singa iray ho anao ampifanaraho amin'ny fahaizantsika mandre izany famoahana feo izany. Raha mandeha amin'ny sehatry ny feo isika dia ho hitantsika eo alohan'ny safidy hampiasana ny Adapt Sound.
Amin'ny fotoana hampiasantsika azy io dia hahita safidy hafa isika. Azo antoka fa hahagaga anao fa afaka misafidy sokajy isan-karazany ianao ary izany dia satria mbola tanora isika dia lavorary ny fahaiza-mihaino ary very izy ireo rehefa antitra. Misafidiana iray manokana ho an'ny taonanao.
Ny UI iray ao amin'ny Samsung Galaxy dia manana fiasa mahaliana kokoa toy ny feo fampitoviana. Tsotra ihany ity iray ity, satria araky ny fombanao mozika Ny Favorite dia hametraka ny treble, ny afovoany ary ny bas ao amin'ny ekipana. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny mampiasa fanao mahazatra raha tianao ny manohina ireo masontsivana ireo hahazoana feo mifanaraka amin'ny tsiro anao kokoa.
Bokotra volume hifehezana ny haino aman-jery
Amin'ny alàlan'ny default, ny bokotra volume an'ny Galaxy dia mifehy ny habetsaky ny antso. Izany hoe, raha tsindrio ny iray, dia hitombo ny feon'ny feon-kira rehefa miantso anao izy ireo. Manana ny Safidy hanamboarana ireo bokotra volume hampiasa azy ireo amin'ny fifehezana multimedia mba hahafahantsika manangana sy mampidina ny feon'ny mozika ankafizinay amin'ny Spotify.
Tsindrio ny bokotra volume.
Miseho ny bara volume.
Mihetsika izahay ary hiseho ireo masontsivana rehetra. Izahay dia mijery ny farany hampiasana ny fanaraha-maso multimedia.
Ity fampiharana ity dia tsy maintsy apetraka ao amin'ny Samsung Galaxy miaraka amin'ny UI iray, satria hahafahanao manana fanaraha-maso mandroso kokoa amin'ny audio. Tsy hanao lisitra azy rehetra izahay, fa azonao atao ny mahafantatra azy bebe kokoa amin'ity boky ity.
Ampitomboy ny dingana amin'ny volume
Ao amin'ny Sound Assistant na Sound Assistant dia azontsika atao ny manamboatra araka ny tokony ho izy ireo dingana nalaina avy rehefa manindry ny iray amin'ireo bokotra fanalahidy isika. Raha apetratsika amin'ny 1, izany hoe, ny kely indrindra, mila dingana 150 hahatratra ny haavony avo indrindra isika. Raha apetratsika amin'ny roa amin'ny fampiharana, antsasaky ny sisa.
Fomba manokana an'ny afaka mampihena ny habetsaky ny farafaharatsiny mba tsy hanelingelina sy hanohy hihaino an'io lalao video na mozika avy amina mpilalao io.
Bluetooth 5 ho an'ny audio roa
Dual Audio dia safidy ho an'ny mampihetsika fitaovana Bluetooth roa ary izy ireo dia navitrika niaraka tamin'ny loharanom-peo mitovy. Apetrakay ny mozika ankafizinay, ampiasainay ny headphone roa, avelanay ho an'ny mpiara-miasa izahay, apetrakay amin'ny tenantsika ny iray ary hihainoana ny mozika isika miaraka amin'izay. Fomba manokana hizarana mozika, toy ny azo ampiasana amin'ny tanjona hafa.
Andao ho any Fifandraisana> Bluetooth> Ampandehano ny Bluetooth> Bokotra zorony ankavanana ho an'ny Advanced> Activate Dual Audio.
Ny headset tsirairay dia samy manana ny codec azy manokana, indrindra raha avy amina marika fanta-daza toa an'i Sony izy io. Raha manana ny sasany amin'ny Sony isika dia afaka mandeha any amin'ny sehatrasa mpamorona ary mitady codecs manokana. Misafidy ny iray atolotry ny mpanamboatra avy amin'ny boky torolàlana na boky torolàlana izahay ary izay ihany. Hahay hanatsara ny audio izahay ho an'ny headphones.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny tetika tsara indrindra hanatsarana ny audio an'ny Samsung Galaxy miaraka amin'ny UI iray
Tifitifitra feno fihetsiketsehana miaraka amin'i Bombastic Brothers